Gurman က Apple သည် ဘက်ထရီပါဝါသုံး HomePod | ငါ mac ကပါ။
Jordi Gimenez | | ကောလာဟလများ
Apple သည် ၎င်း၏ အင်ဂျင်နီယာများနှင့်အတူ နောက်ဆုံးတွင် ထွက်ပေါ်လာသည့် လက်တစ်ဆုပ်စာ ထုတ်ကုန်ကောင်းများပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်နေသည်မှာ ထင်ရှားသည်။ ဤကိစ္စတွင် လူသိများသော ဇကာ Mark GurmannApple သည် ပြင်ပဘက်ထရီပါရှိသော HomePod mini ကို လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏နောက်ဆုံးသတင်းလွှာတွင် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
iPhone များအတွက် MagSafe အားသွင်းခြင်းစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းသည်ဤအရာအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်သေချာသည်၊ ၎င်းသည်ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သောဘက်ထရီနှင့် MagSafe ကိုပေးဆောင်သော HomePod ကဲ့သို့သောစမတ်စပီကာသည်များစွာသောသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်မည်မှာသေချာပါသည်။ .သမားတွေ. ပြင်ပဘက်ထရီပါရှိသော စပီကာများသည် စျေးကွက်တွင် အမြောက်အမြားရှိနေသည်မှာ ထင်ရှားသည်။ လက်ရှိအချိန်မှာ Apple က သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို တီထွင်တဲ့အခါမှာ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ သိထားပြီးသားပါ။
Mark Gurman က ဒီစပီကာကို တွေ့ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Gurman က Apple သည် ပြင်ပဘက်ထရီဖြင့် ဤစမတ်စပီကာ၏ ရှေ့ပြေးပုံစံများနှင့် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း Gurman ကဖော်ပြသကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးတွင် ဤစပီကာကို စျေးကွက်တွင် မတွေ့ရတော့ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။ လက်ရှိဈေးကွက်တွင် ထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိနိုင်သော်လည်း ကန့်သတ်ချက်များရှိနေသည်မှာ ရှင်းပါသည်။ အထူးသဖြင့် စပီကာ၏ အသိဉာဏ်အပိုင်းတွင် ကန့်သတ်ချက်များအကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်အများစုအတွက်။
Apple သည် အဆုံးတွင် အလင်းပေါက်မလာတော့သည့် ရှေ့ပြေးပုံစံများနှင့် ပရောဂျက်များစွာကို အမြဲလုပ်ဆောင်နေပြီး Cupertino ရုံးချုပ်၏ စားပွဲများကို ဖြတ်သွားကာ ပြင်ပဘက်ထရီပါသည့် စမတ်စပီကာများ ဖြတ်သွားကာ အနာဂတ်တွင် အနည်းဆုံး အလင်းရောင်ကို မမြင်ရတော့ပေ။ . တစ်ချိန်ချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် ဤစတိုင်လ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို စတင်ရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်သော်လည်း၊ အခုအချိန်မှာတော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » ကောလာဟလများ » Gurman က Apple သည် ဘက်ထရီပါဝါသုံး HomePod ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။